गठबन्धनहरुमा सीट बाँडफाँटको सकस : समानुपातिकमै अझै विवाद
काठमाडौँ । पार्टी एकताको पूर्वाभ्यासस्वरुप दुई ठूला वाम दल चुनावी तालमेलमा सैद्धान्तिक रुपमा जुटे पनि व्यवहारिक रुपमा उनीहरु भागबण्डा मिलाउने सकसमा उल्झिएका छन । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र
माओवादी मन्त्री अझै सरकारमा किन ?
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र हुनुपर्ने मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने संभावित आशंकाका वीच बिना बिभागिय बनाईएका माओवादीका १९ मन्त्रीको समूह सरकरबाट हट्न हिचकिचाईरहेको
वाम एकताको हाउगुजी पछि अबको काँग्रेस कता ?
काठमाडौँ । बाम गठनधनका कम्पनले ध्रुवीकृत हुदै गएको नेपाली राजनीतिमा मुख्य सत्तारुढ दल काँग्रेस सबैभन्दा बढी चुनौतिमा चेपिएको छ । कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाको भनाईलाई सापट लिने हो भने कांग्रेसका लागि
प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डको 'विना विभागीय इगो’
काठमाडौँ । सामान्यतः सरकार फेरबदल तथा मन्त्रीहरुको कार्य बिभाजन सवन्धी काम कुनै पनि देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको आन्तरिक कार्यक्षेत्रको प्रश्न हो । कार्यकारी प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्टपतिको शासकीय व्यवस्था भएका देशहरुमा प्रधानमन्त्री